Indlela ende eya ekhaya, indaba yokuphila okumakwe ukuhlupheka | Izincwadi Zamanje
En Indlela ende eya ekhaya (1998), intombazane ibhekana nodlame nokuhlukunyezwa endaweni eyayimiselwe ukuba inikeze indawo yokuhlala nokuvikeleka, kubukeka sengathi ilahlekelwa yikho konke… kodwa kukhona okuzoshintsha. Lesi yisandulela sale noveli ngumbhali waseMelika uDanielle Steel. Umbhalo uveza indaba kaGabrielle, intombazane enokuphila okumakwe ukuhlupheka.
Ngenxa yalokhu okungenhla, umqondo womndeni nekhaya uthola incazelo ehluke kakhulu ezinkolelweni zendabuko. Ngaphandle kobufakazi obuqinile be-protagonist encane, le ncwadi inqobe izinhliziyo zezigidi zabafundi. Futhi ukuthi ukungena kule ndaba ukufaka ubunzima nokungabi nabulungisa, noma kunjalo, le ndaba futhi ikhombisa ukuthi ungawunqoba kanjani umongo omubi kangaka.
1 Isifinyezo seThe Long Way Home
1.2 Indlela ende
2.1 Isitayela sokulandisa
2.2 Okungaphezu kwenoveli ekhuluma ngokuhlukunyezwa kwezingane
3 Mayelana nomlobi, uDanielle Steel
3.1 Impilo enzima yombhali
3.2 Isikhathi sokuphila esixhunyaniswe nokubhala
3.3 Ubuntwana obudabukisayo njengengqikithi ephakathi
3.4 Ezinye zezincwadi ezithengwa kakhulu nguGabrielle Steel
Isifinyezo se- Indlela ende eya ekhaya
Njengoba kucacisiwe ezigabeni ezedlule, le noveli igxile osizini lwentombazane elimele ngokomzimba nangokwengqondo. Ukuthola okuningi, intombazane eneminyaka emithathu ubudala iyaziqonda njengecala lokuhlukumeza, ngoba umama wakhe onodlame usho kanjalo. Ebhekene nalokhu, ubaba - mhlawumbe ngenxa yokungabi nandaba noma ukwesaba - akakwazi ukunqanda ukungabi nabulungiswa kuGabriele.
Ngale ndlela, ngokuhlukunyezwa, ukushaywa nokuthukwa ngendlela yosuku, kuvela ubuntwana obuhlukumezeke ngempela. Njengoba intombazane ikhula, ukwanda ngokomzimba, ngamazwi nangokwengqondo nakho kuyanda. Kuze kube seqophelweni lokuthi, Ngemuva kokushaya intombazane ngendlela ebulalayo, umama uthatha isinqumo sokushiya esigodlweni. Hhayi ngaphandle kokuthembisa kuqala "Ngizobuya."
Indlela ende eya ekhaya ...
Esigodlweni, intombazane ekugcineni iyalwazi uthando nempatho enhle, kuze kube manje engakaze ibonwe. Kakade esemusha, uGabrielle uthandana nompristi osemncane kakhulu, ngaleyo ndlela ezwa uthando lwakhe lokuqala ngendoda. Ngeshwa, umfundisi uyadlula emhlabeni, ngakho-ke, usizi lushaya inhliziyo yale ntombazane enebhadi.
Ngalesi sikhathi, intombazane ikhombisa ukuzimisela okuncomekayo kokunganqotshwa ukudikibala noma ukuthwalwa yisifiso. Naphezu kwakho konke ukulahlekelwa okubuhlungu, umlingiswa ophambili uyakwazi ukwelapha amanxeba akhe futhi aqhubekele phambili. Ekugcineni, uGabrielle uthatha isinqumo sokushiya isigodlo ukuze athole inkululeko ezweni langaphandle ... lapho ukudumazeka kungashodi khona, kepha useyazi ukuthi angabhekana kanjani nakho.
Imibhalo kaDanielle Steel ingahlukaniswa ngokujula kwengqondo kwabalingiswa bakhe (Le noveli elandiswe kumuntu wesithathu ayinjalo). Yize iNew Yorker ihlukaniswe njengomlobi wamanoveli, Indlela ende eya ekhaya akunabudlelwano naleso sihloko. Ngokuphambene nalokho, ukuqubuka kungumuzwa ovelele kokuningi kokuthuthuka.
Ngenxa yalokho, incazelo ecacile yabo bonke ubuhlungu obungokomzimba nobungokomzwelo obuzwa yi-protagonist encane iyashaqisa kumbukeli. Azikho izinto eziyimbangela yesakhiwo, noma ngabe umlingiswa oyinhloko mncane kangakanani. Ngokufanayo, ngezwi lombalisi okude, umfundi uyayibona imvelo enobutha kaGabrielle kanye nokunye kokuvuma kwakhe nokusondelana kwakhe.
Okungaphezu kwenoveli ekhuluma ngokuhlukunyezwa kwezingane
Isimo sokwamukela siphazamisa kakhulu: intombazane eneminyaka emithathu ihlukunyezwe ngunina. Owesifazane unenkinga (engazibandakanyi?) Yobaba ongakwazi ukusebenzisa indima yakhe njengomvikeli womndeni. Ngaphandle kwalokhu "ukwamukela" okungahambi kahle, umbhali kancane kancane uyakwazi ukudlulisa eminye imizwa.
Ngale ndlela, i-Steel isuka ekungeneni okushubile ngokweqile ekuvezeni imizwa yethemba, noma ngabe kukhona phakathi kwamashwa. (Kulapho kukhona ingwegwe engenakuphikwa eyenziwe emphakathini). Khona-ke, izindima zivela ngezici ezithile zamathenda, ngenkathi Ukuqina namandla kaGabrielle kuyabonakala. Ngalesi sizathu, abafundi bahlala kuze kube ekhasini lokugcina ukuze bazi ukuthi bayaphi.
Mayelana nomlobi, uDanielle Steel
Ngo-Agasti 14, 1947, umbhali wamanje uDanielle Steel, owaziwa ngamanoveli akhe amaningi, wazalelwa eNew York City. Empeleni, Uphakathi kokufundwa kabanzi e-United States futhi uthole ukuzwelana nabafundi bakhe. Futhi lokhu akuvamile, izethameli zixhuma kalula nezindaba zazo ezinabalingiswa abaphikelelayo lapho bebhekene nokuhlangenwe nakho okunzima kakhulu.
Impilo enzima yombhali
Umlando kaDanielle Steel awusiwo "umbhede wama roses" Ngokuhlangenwe nakho kwabo, imvelaphi yamaculo abo ingaqondakala ngendlela ethile. Ngaphandle kokulandisa, isazi seNew York sibhale nezinkondlo kanye nezincwadi ezimbalwa ezingezona eziqanjiwe. Ngaphezu kwalokho, ngo-2003 wavula igalari ukuxhasa abaculi abasafufusa abasafufusa.
Ngokufanayo, U-Steel ube nempilo ekhetheke kakhulu, ephawuleka ngezingqinamba ezingeni lomlingani wakhe nomndeni wakhe (ushiye imishado emihlanu ngemuva). Kodwa-ke, ukwazile ukunqoba zonke izithiyo, empeleni, usebenzise amathuba okudala nawokuhweba ngalezi zimo ngokubhala. Okwamanje, umbhali waseMelika unedumela elihle kakhulu lokubhala Ezingeni likazwelonke nakwamanye amazwe.
Isikhathi sokuphila esixhunyaniswe nokubhala
UDanielle Steel waqala ukubhala esemncane kakhulu; Kakade ebusheni bakhe wayenezindatshana eziningana zezinkondlo (ezanyatheliswa emashumini ambalwa eminyaka kamuva). Kamuva —Weneminyaka engu-18 ubudala- waqeda inoveli yakhe yokuqala, yize, ngokufana nezinkondlo zakhe, wakushicilela ngemuva kweminyaka eminingi.
Ngokuhamba kwesikhathi, U-Steel ukwazile ukushicilela izincwadi ezingaphezu kwamashumi ayisishiyagalombili, ezinye zinamarekhodi okuthengisa noma izindawo zokuqala ze- best-nabathengisi. Njengokungathi lokho bekunganele, uCasa del Libro umbuyekeza njengombhali ofundwa kakhulu emhlabeni, njengoba kuthengiswe amakhophi angaphezu kwezigidi ezingama-800. Ngokuhambisana nalokhu, ubonwa njengomdali onamandla nowokuqala; Inganekwane (2019) yincwadi yakhe yakamuva.
Ubuntwana obudabukisayo njengengqikithi ephakathi
Njengomuntu ophambili we Indlela ende eya ekhaya, UDanielle Steel wahlangabezana nezehlakalo ezithile ezihlukumezayo ebuntwaneni bakhe. Ngakho-ke, ubuntwana buveze impilo enhle netimu yokubhala kuye, ikakhulukazi ngemuva kokulahlekelwa yindodana (uNicholas). Wahlushwa ukuphazamiseka kwengqondo waze wazibulala ngo-1997. Ngemuva kokushona kwendodana yakhe, u-Steel ufake Ukukhanya kwakho kwangaphakathi.
Ishicilelwe ngo-Okthoba 1998, Ukukhanya kwakhe okukhanyayo -ngesiNgisi- kube ngesinye sezihloko zakhe ngempumelelo enkulu yokuhlela. Ngawo lowo nyaka, i-Steel yethula Indlela ende eya ekhaya (Meyi) kanye I-clone (Julayi). Manje le mibhalo emibili yokugcina etholakele ukusebenza kahle kwebhizinisi, kodwa ayiqhathaniswe nesigaba esithengisa kakhulu esigcinwe yilezi zincwadi ezilandelayo:
Ezinye zezincwadi ezithengwa kakhulu nguGabrielle Steel
I-Kaleidoscope (Kaleidoscope, 1987)
Umyalezo kaNam (Umlayezo ovela kuNam, 1990)
Amagugu (Amagugu, 1992)
Isipho (The Gift 1994)
Udumo lokuthula (Athule Ahloniphe, 1996)
Itheku eliphephile (Isikhumulo Esiphephile, 2003)
I-Echoes (Amahloka, 2004)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Indlela ende eya ekhaya